Egwu Egwu - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ogbugbu na-egbu egbu n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo egbu egbu na ogwe aka ha site na nhazi ime ink na-acha aja aja; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
2. Ogbugbu na-egbu egbu n'elu ogwe aka ekpe aka na-eme ka nwoke mara mma
Ndị na-ahụ uwe aka na-enweghị aka ga-ahụ maka igbu egbugbu na ogwe aka aka ekpe ha iji weta anya ha
3. Ndị mmadụ na-eme egbu egbu na-atụ egwu Chineke n'akụkụ aka ekpe ha iji mee ka ha maa mma
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na-egbu egbu na-egbu egbu n'ubu aka ekpe ha na-eji obere ink dee ya, ka ha mee ka ha mara mma na ihe mara mma na pubic
4. Igbugbu egbu egbu na aka nri na-eme ka mmadụ dị jụụ
Ndị ikom na-etinye uwe elu na-akachaghị aka ga-ahụ maka igbu egbugbu na aka nri ha. Nke a na-eweta ọdịdị nwoke ha
5. Igbugbu egbu egbu maka ụmụ nwoke na-eme ka ha lee anya
Ndị mmadụ na-ahụ ụdị ejiji ink nke akpụkpọ ụkwụ na-egbu egbu n'ubu iji mee ka ha bụrụ dike
6. Egwu egbu egbu n'apata ụkwụ nke nwoke na-eme ka ọ mara mma
Ndị nwere ụkwụ na-acha uhie uhie nwere mmasị na egbugbu a na-egbu egbu n'akụkụ apata ụkwụ ya na ejiji ink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha.
7. Ogbugbu na-egbu egbu na ogwe aka dị ala na-eme ka onye na-ahụ anya na-ele anya na nwoke
Ndị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja nwere mmasị na igbu egbu egbu na ogwe aka dị n'okpuru mkpịsị uhie ojii; Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya na-acha
8. Igbugbu egbu egbu maka ụmụ nwoke na-eji ejiji ink na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-agakarị maka egbugbu Viking na -eme nkịkị ojii n'ime bicep; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
9. Ntughari Ink nke a na-egbu egbu na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka nwoke dị ebube
Ngosipụta imepụta nke ink nke a na-egbu egbu na-emetụta ahụ mmadụ iji mee ka nwoke dịkwuo mma ma mara mma
10. Ogbugbu na-egbu egbu n'ubu ya na -eme ihe eji agba aja aja na-eme ka nwoke mara mma
Ndị na-ahụ n'anya na-ahụ n'anya ga-ahụ Ụdị egbu egbu na ubu ya na nhazi ime ink. Ụdị egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka anya dị mma
11. Igbugbu egbu egbu maka ụmụ nwoke na-eji ejiji ink na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-agakarị na-egbu egbu na-eji akara ejiji ink na ubu; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
12. Ihe nkedo ejiji na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na-eme ka mmadụ lee anya
Ndị mmadụ na-achọ ịmepụta egbugbu a na-egbu egbu na ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a na-ejikọta agba nke ụkwụ iji mee ka onye ahụ na-egbuke egbuke
13. Ogbugbu na-egbu egbu na ejiji nwa ink na-eme ka mmadu di nma
Ndị na-achọ ka ndị na-akpa ọchị ga-ahụ ụdị egbugbu na-egbuke egbuke na ejiji ojii onu
14. Igbugbu egbu egbu na azụ na-eme ka ndị mmadụ mara omume ọma
Ndị mmadụ ga-enwe mmasị ịnweta egbugbu Viking na azụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
15. Igbugbu egbu egbu na-eji oji na-acha odo odo na aja aja na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo egwu na-eji oji na-acha odo odo na aja aja n'ubu; nke a na-eme ka ha dị oke mma
16. Ogbugbu na-egbuke egbuke n'elu igbe dị n'elu ya na ejiji ink na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ ga-aga maka igbu egbu egbu na-eji ejiji ink na-acha odo odo n'elu ọnụ ha iji mee ka ha dị mma ma mara mma
17. Egwu egbu egbu n'akụkụ ụkwụ nke nwoke na-eme ka ọ mara mma
Ndị nwere ụkwụ na-acha uhie uhie hụrụ ụdị ikiri a na-egbuke egbuke nke egbu egbu. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha.
18. Igbugbu egbu egbu maka ndị ikom na-eji ihe ngosi ink nke na-egbuke egbuke mere ka ha dị mma
Ndị mmadụ na-ahụ maka igbu egbugbu maka ndị ikom na-eji ihe ngosi ink na-egbuke egbuke n'azụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
19. Igbugbu egbu egbu na ogwe aka dị ala na-eme ka nwoke dị jụụ
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe egbugbu na-egbu egbu na ogwe aka nke aka. Nke a na-enye ọdịdị nwoke
20. Ogbugbu na-egbu egbu na-eji ihe eji agba aja aja na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo Viking na-eji nkedo ink na-acha aja aja n'ubu, na-eme ka ha mara mma
21. Ogbugbu na-egbu egbu na ụkwụ na-eweta anya dị elu
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na-egbu egbu egbu na ụkwụ na-eji ejiji ink. Ụdị egbu egbu a ga-eme ka ha nwee anya dị mma
22. Igbugbu egbu egbu na-eji ejiji ink na-acha uhie uhie na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ ụdị igbu egbugbu na-eji ejiji ink na-acha anụnụ anụnụ na nhazi ime ink na-acha aja aja; egbu egbu a na-eme ha ka ha dị egwu
23. Igbu egbugbu n'akụkụ n'akụkụ na-eme ka nwoke dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe egbugbu na-egbu egbu n'akụkụ n'akụkụ ya na nhazi ime ink ojii; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
24. Ogbugbu na-egbu egbu na ihu ụkwụ na-eme ka mmadụ na-ele anya
Ndị mmadụ ga-ahụ ụdị egbugbu na-egbu egbu na ụkwụ ihu ya na-eji ejiji onk. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
na-adọ aka mmaokpueze okpuezearịlịka arịlịkaGeometric Tattoosn'olu oluegbu egbu osisi lotusazụ azụkoi ika tattooUche obiegbu egbu maka ụmụ nwokena-egbu egbuọnwa tattoosegbu egbu ebighi ebiegbu egbu mmirindị na-egbuke egbukeegbu egbu diamondegwu egwuEgwu ugozodiac akara akaramma tattoosaka akaakwara obiegbu egbu okpuọdụm ọdụmegbu egbu egbuima ima mmaaka mma akaagbụrụ ebonnụnụaka akaegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbuegbugbu egbugbudi na nwunyeụkwụ akandị mmụọ ozienyi kacha mma enyiỤdị ekpomkpaechiche egbugbuudara okooko osisingwusi pusiakpị akpịenyí egbu egbuụmụnne mgbumehndi imeweAnkle TattoosNtuba ntughariegbu egbu hennarip tattoosakara ntụpọ